सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– अनिल केशरी शाह एक जना त्यस्ता ‘लाइक माइन्डेड’ बैंकर मानिन्छन, जसले कुनै न कुनै नयाँ विचार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । अहिले उनी संघीयताले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो फाइदा पुगेको निश्कर्षमा छन् ।
हाल नविल बैंकका सीईओ रहेका शाहसँग हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, स्प्रेड दर र ब्याजदर लगायतका विषयमा बैंकर शाहसँग गरेको कुराकानीः
मेरो विचारमा ब्याजबाट हुने आम्दानी घट्न सक्छ । जस्तो स्प्रेड रेट ५ बाट ४.५ मा आउँदा नविल बैंककै बटमलाइनमा हिट गर्छ । तर, त्यसले हिट गर्छ भन्दैमा हामी केही नगरी हातमा हात राखेर बस्दैनौं । यसका लागि हामीले बिजनेस बढाउनुपर्छ । स्प्रेड रेट घटे पनि हाम्रो बिजनेसको भोल्युम बढ्यो भने त नाफा पनि बढ्छ नि । तर, स्प्रेड रेटको विषयमा मेरो अर्को धारणा पनि छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेटले यति धेरै मुनाफा आर्जन हुँदो रहेछ भने भने अन्य क्षेत्रमा स्प्रेड रेट धेरै ठूलो छ । एउटा मोटरसाइकल विदेशमा बनेको हुन्छ, कर तिरेर यहाँ ल्याइन्छ । तर, त्यो मोटरसाइकलमा ३०र३५ प्रतिशत स्प्रेड खाने गरिन्छ । यो ठीक हो त ?
नागरिकको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुमा पनि ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेट तोक्दा हुँदैन ? सानो बिजनेस छ भने बरु १० प्रतिशत नै दिउँ । तर, ठूला उद्योग धन्दामा त ध्यान दिनु पर्‍यो नि । जस्तो– एउटा सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ, त्यो सबै खर्च कटाएर ५ प्रतिशत स्प्रेड (नाफा) खाएर उपभोक्तालाई बेचौं न त । यस विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
अब त्यो बैंकसँगै ३४ वर्षअघि खोलिएको उद्योगको कुरा गरौं ।
त्यो उद्योग खोल्ने मान्छेको त्यतिबेला ५० करोडको सम्पत्ति थियो भने यतिबेला अर्बौं अर्बको पुगिसकेको छ । जीवनस्तर पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ । तर, त्यही उद्योगमा काम गर्ने कामदारको जीवनस्तर भने जहाँको त्यहीँ छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने र उद्योगमा काम गर्ने कामदारबीच तुलना गर्नुस त, कत्ति फरक छ ? बैंकमा लगानी गर्ने र काम गर्ने दुबैको जीवनस्तर फेरिँदा उद्योगमा चाहिँ उद्योगपतिको मात्रै जीवनस्तर फेरिएर कामदारको जहाँको त्यही हुनु त ठीक होइन नि ।
म त भन्छु, बैंकिङ क्षेत्रजस्तै अन्य क्षेत्रहरुले पनि यसरी नै नाफा बढाउन् । बढी कर तिरुन् । तर, नाफाचाहिँ काम गरेर बढाउनुपर्‍यो । अनि बढाएको नाफा देखाउनुपर्‍यो र बढेको नाफा अनुसारको कर तिर्नुपर्‍यो
म मेरो जागिर छाड्न तयार छु, तर बचतकर्ताको हित विपरीत काम गर्न सक्दिनँ । ब्याजदर अहिले घट्न शुरु भइसकेको छ । पहिलो त्रैमाससम्म समय चाहिँ लाग्छ, ब्याजदर घट्छ
अर्को कुरा, गाउँघरमा हेर्ने हो भने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै भेट्न सकिन्छ । युवा जनशक्ति त सबै विदेशमा छन् । जब स्वदेशमा खेती गर्ने जनशक्ति नै छैन भने कसरी लगानी गर्नु ? हाम्रा सम्भाव्य किसानहरु मलेसिया, साउदी, कतार, कोरियाजस्ता मुलुकहरुमा छन्, अनि बैंकहरुले कसरी कृषिमा लगानी गर्ने ? पैसा रोपेर त फल्दैन ।
तर, बाणिज्य बैंकहरुले सानो कर्जा नै दिँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि कृषकको !
अहिले अधिकांश सेयर कारोबार गर्ने काठमाडौं बस्ने नै छन् । काठमाडौंमा मात्रै ब्रोकर छन् र यहाँ कारोबार हुन्छ । अब वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न दिइने भएको छ । यसकारण स्थानीय तहमा बैंक पुगेपछि पुँजी बजारको दायरासमेत बढ्छ । भनेपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ ?